မီရှဲက ဆံပင်ရှည်တော့ ခေါင်းလျှော်ရည် ခဏခဏကုန်တယ် | | Yangon Thu Michelle
မီရှဲက ဆံပင်ရှည်တော့ ခေါင်းလျှော်ရည် ခဏခဏကုန်တယ်လေ။ အဲ့ဒါနဲ့ ပြီးခဲ့တဲ့ နှစ်ရက်က ခေါင်းလျှော်ရည် သွားဝယ်တော့ သုံးနေကြ Dove က ကံစမ်းမဲပါတဲ့စတေကာနဲ့ ဘူးလေးတွေတွေ့လို့ဝယ်လာသေးတယ်။ ဘူးပေါ်မှာတော့ သြဂုတ်လကုန်ထိပဲလို့ရေးထားလို့ လန့်သွားတာ. Dove Facebook Page မှာဝင်မေးကြည့်မှ အောက်တိုဘာလကုန်ထိ ရသေးတယ်ဆိုတာ သိရမှ စိတ်သက်သာရာရတော့တယ်… တော်သေးတာပေါ့ ဟိဟိ..ဘူးပေါ်က ကုဒ်နံပါတ်လေး ခဲခြစ်ပြီး Dove Message Box ကို ပို့လိုက်တော့ မီရှဲတို့ဘာပေါက်တယ်ထင်လဲ.. ? ဖုန်းဘေလ် ကုန်နေတာနဲ့အတော်ပဲ..၅၀၀ ပေါက်တယ်လေ…
ဖုန်းဘေလ်တွေ၊ အင်တာနက်ဒေတာတွေ တစ်ခုမဟုတ် တစ်ခုပေါက်မှာသေချာတဲ့အပြင် iPhone X ဖုန်းလည်းကံထူးနိုင်မှာတဲ့… Page မှာတော့ iPhone X ပေါက်တဲ့ ကံထူးရှင်တစ်ဦး တွေ့ခဲ့သေးတယ်။ ဆုတွေလည်းရှိသေးတယ်ပြောထားတော့..ချစ်ရတဲ့ မိတ်ဆွေတို့လည်း ကံစမ်းကြည့်လိုက်အုန်းနော်။
Prev post: မီရှဲနဲ့ မွေးလမှာ အမှတ်တရ Yangon Heritage Trust နဲ့ပူးပေါင်းပြီး လျှောက်သွားခြင်းNext post: စွန့်စားမယ် အချစ်ရေ လိုက်ရဲလား